Midlalo Ukutya Ukulahlekelwa ngumzimba Monodiettes Isonka
Ngokukholelwa ukuba isinkwa asikhuthazwa ngabo bantu abanqwenela ukunciphisa ubunzima babo. Nangona kunjalo, kukho ukutya apho isinkwa sisona sigxina. Kodwa, ukhetha oku kutya, kufuneka uqaphele abantu abanezifo ezingapheliyo, ingakumbi isondlo sesisu. Oku kutya akufanelekanga nakwabhinqileyo abakhulelweyo, oomama abangabongikazi, abantwana kunye nabaselula abakwazi ukuvelisa iimveliso zokubhaka. Njengokusebenza kwanoma yiyiphi enye, kwaye ukuphumelela kwesi sondlo kunokunyuswa ngokudibanisa nokuzivocavoca umzimba. Ngokutsho kwabaphuhlisi bokutya, ngenxa yoko, unokuphosa iitriki ezintathu okanye ezine zokunyuka ngokweqile kwiintsuku ezisixhenxe. Ngokuqinisekileyo, yonke into iyimntu ngamnye, kwaye umphumo uya kuba ozinzile xa ungasiphumeli kwimeko yokulahlekelwa ubunzima. Imenyu esondeleyo yesondlo sokutya esinikwe kule ncwadi yenzelwe iveki, kuba ayinakuhlala ixesha elide ukunyamekela ekudleni okunjalo, kwaye kufuneka iphindwe kabini ngaphezu kweenyanga ezintathu.
U-Sophia Loren - umxholo wesifazane - ubungqina bokuba unokukrazula ubunzima obunzima ngaphandle kokushiya i-spaghetti yakho oyintandokazi, i-macaroni kunye nemveliso yefubhe. Khumbula ukuba ubunzima bakhe bungama-kilogramgram engama-60, okwenyuka kwama-173 centimeters. Umdlali okholelwayo ukholelwa ukuba i-pasta, ethanda kakhulu kwaye idla phantse-imihla ngemihla-ukutya okunempilo, ingakumbi xa kunikwe i-sauces elungiselelwe kwimifuno, okanye utamatisi. USophia Loren uxela ukuba kuyimfuneko ukulawula ubuninzi bezabelo ezidliwayo kwaye ungadli iikhalori ezininzi ngexesha elilodwa-le nto iyimfihlelo eyintloko yokutya kwakhe. Esikhundleni sokusetyenziswa kakubi kwekhilimu omuncu kunye neesekhisi zesekhisi, unokongeza i-sauce ephantsi ye-spaghetti.
Ukutya kwesonka. Ikhetho lokuqala. Imenyu yesampula.
Imilinganiselo yansuku zonke: - Ngokuxhomekeka kwintando yakho, amagremu angama-400 omnyama okanye i-300 grams yesonka esimhlophe; - i-100 grams yezithelo okanye imifuno (ungathabatha zombini iziqhamo kunye nemifuno ngendlela efanelekileyo kuwe); isiqingatha seglasi yobisi; - 50 amagremu e-fat oil stewed, inyama ephekiweyo okanye ebhaka, intlanzi okanye iinkukhu.
Zonke iimveliso ezingentla zihlulwe zibe zizidlo ezintathu.
Kwi-reception yokuqala - imifuno, iziqhamo, isonka.
Kwisibini yesibini yokufumana, isonka.
Indlela yesithathu inyama kunye nesonka.
Gcina okungenani iiyure ezintlanu phakathi kokutya. Ukongezelela ubisi, ungayiphuza kuphela itiye eluhlaza ngaphandle kweshukela okanye namanzi. Ushukela kunye netyuwa kufuneka zifakwe ngaphandle kokutya, kuphela ukusetyenziswa kweziqholo zemifuno kuvunyelwe.
Ukutya kwesonka. Inketho yesibini. Imenyu yokutya.
Isiseko solu hlobo lwesondlo sesonka sisitya esincinci. Umbhali uthi umntu osebenzisa ii-carbohydrate ezinzima ngamaxesha amaninzi ngosuku (isonka kunye nemifuno, i-avocado okanye isincinci esincinci esisikiweyo), ukwandisa umgangatho we-hormone yolonwabo (i-serotin) emzimbeni, owenza unomvakalelo wokuxhamla. Ukongezelela, isonka sinotye kwiithamini ze-B, ezichaphazela kakuhle imeko ye-system ye-nervous.
Abasetyhini banokutya ukutya ezilishumi elinambini zesonka rhoqo, kunye namadoda-aneshumi elinesithandathu. Ukutya okunjalo kufanelekile kubantu abanesifo seswekile abangenayo i-insulin.
Ukutya kwezonka kubandakanya izigaba ezimbini, owokuqala owenzelwa iintsuku ezilishumi elinesine, kwaye okwesibini - engapheliyo, ihlala igcinwe ukuze kugcinwe iziphumo. Kuzo zombini izigaba zolu kutya, kufuneka udle amanzi aneleyo: kubafazi - ubuncinane iiglasi ezilishumi ngosuku, ngamadoda-ubuncinane abalishumi, kungabandakanyi itiye emnyama kunye nekhofi. Kwakhona kubalulekile ukuthatha amalungiselelo e-calcium kunye nama-multivitamin. Ukutya ukutya kwesonka kufanele kube ngamaxesha onke ama-3-4 iiyure.
Isigaba sokuqala sokutya (qhubeka iintsuku ezilishumi elinanye).
Kubafazi besuka kwii-8 ukuya kwi-12 zeesonka zokutya, ngamadoda-12-16. Ukutshintshwa kweesibini zomtya wesonka kunokutya njengesitya esinye sesigqirha.
1. Unokugcoba kwaye ubeke isonka malunga nantoni yonke: i-avocado, i-fat cottage cheese, i-ham, intlanzi okanye i-fishned cakes - into eyona nto kukusabalalisa isalathisi esincinci, esicatshulwa ngokucacileyo okanye ukuyifaka kwisiqwenga esincinci, kwaye into ebalulekileyo - ayikho into emnandi.
2. Naluphina ubuninzi kunye nayiphi na uhlobo, imifuno engekho-starchy ingasetyenziswa.
3. Kuvunyelwe naluphi na uhlobo kunye namaqanda amathathu abilisiwe.
4. Kubalulekile ukuthatha ukutya ngosuku ngemisebenzi enye yeziqhamo (ipeyari enye, i-apula, i-plums enye, njl njl.), Kuvunyelwe ukuyifakela i-dessert yokutya, kodwa kungekho rhoqo.
5. Kubalulekile ukubandakanya ukutya kwansuku zonke kwama-200 amagremu e-yogurt.
6. Izihlandlo ezithathu ngeveki kufuneka zitya ukutya kweentlanzi okanye inyama kunye nemifuno, kwiintlobo ezintathu okanye ezine, ukunciphisa inani lesonka ngaloo mini.
7. Thatha ukutya kuma-3-4 iiyure. Musa ukunqumla ukutya, nokuba ungazive uthanda ukutya!
Isigaba sesibini sesondlo sesonka.
Kule nqanaba isonka sezonka singathatyathwa yile mveliso.
Zonke iinqununu ezimbini ziyakuthatyathwa: - iglasi le-pasta elungile, iglasi lezityalo (okuphekwe), ii-2/3 izindebe zokutya okubilisiwe (ibhakheheat, i-oatmeal, ilayisi, i-millet). - enye yesikhombi seebhokhwe okanye iifatata ezibilisiwe. - abadayisi be-dietetic. - Ngamanye amaxesha unokutshintsha isonka kunye neepuni ezimbini ze-muesli okanye i-3-4popoons ye-cereal kwasekuseni.
Unlimited kusekhona imifuno. Isixa seziqhamo ngosuku singanyuswa sibe sesithathu.
I-200 grams yegour imihla ngemihla nayo iyimfuneko.
Njengoko kunye naluphi na ukutya, ukuba unomuva wokuthi impilo yakho jikelele iqhubekile, okanye ukuba unayo nayiphi na ingxaki zempilo, ngoko kutya kufuneka kumiswe ngokukhawuleza kwaye ubonisane nengcali.
Inhlanhla enkonzweni yokulahlekelwa ngumzimba nokuphulukisa!
Yoga, qhelisa okanye hayi, icebiso logqirha
Ukuqeqeshwa kwexesha lokubakho: ubunzulu kunye neenzuzo
Iipancake kunye nesipinashi kwi-Lipetsk
Ikhekheji yonyaka weNtsha omtsha kunye nekhilimu e-creamy cream
Impembelelo ephambili yabasetyhini ebhedini
Indlela yokulungisa kangcono ukukhulelwa komntwana
Ngaba kufuneka silahle umfana xa abazali bakhe bechasene nolwalamano lwethu?
Iimfashini eziphathekayo ze-TOP-5 zemihlobiso yobusika 2016-2017
IHoroscope yeCanscer-Women in March 2017
Yintoni ongayinika umntu osebenza naye ngoFebruwari 23
I-Kirkorov yaphela yawa xa uVera Brezhneva ethetha ngelizwi ngokuvakalayo ... (ividiyo)